Madaxweyne Siilaanyo ayaa digreeto ku magacaabay gudi shan xubnood ka kooban oo baadhitaan ku soo samaysa kana soo talo bixisa sicir bararka dalka ragaadiyey | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweynaha jamhuuriyada somaliland mudane axmed maxamed siilaanyo waxa uu maanta digreeto madaxweyne ku magacaabay guddi shan xubnood ka kooban oo soo baadha kana soo talo bixisa sicir-bararka dalka ka jira, oo uu gudoomiye u yahay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyada somaliland.
1. Madaxweynaha ku – xigeenka jsl (Guddoomiye)
2. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda (G / ku xigeen)
3. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada jsl
4. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha
5. Guddoomiyaha baanka dhexe ee jsl
Mudanayaal iyo marwo;
Masuuliyadaha iyo waajibaadka muhiimka ah ee xukuumadayda ka suggestions xagga arrimaha dhaqaalaha dalka waxa ka mid ah la socodka qiimaha shilinka somaliland iyo kolba heerka bill marayo sicirka suuqu (korodh iyo hoss u dhacba). Sida aad la wadâ socotaan, dalkeena waxa ka jira sicir – barar ba’s oo saamayn pounce ah ku yeeshay nolol maalmeedka bulsha weynta jamhuuriyadda somaliland.
Haddaba mudanayaal iyo marwo, waxa lagama maarmaan ah in arrintaa si qoto dheer loo soo baadho, looga soo war bixiyo isla markaana laga soo ururiyo xog waafi ah oo lagu go ‘ aan qaato. Sidaa darteed, guddi ahaan waxaan idin farayaa inaad xog buuxda iga soo siisaan sicir-bararka dalka ka jira, kana soo talo bixisaan wixii arrintaa lagu xallili karo.
Af – hayeenka madaxweynaha jsl.